वीर मधेशी शहिदहरुको सम्मानका लागि दुई न.प्रदेशको नाम ‘मध्य मधेस’ हुनुपर्ने आधारहरु : – Sanghiya Online
वीर मधेशी शहिदहरुको सम्मानका लागि दुई न.प्रदेशको नाम ‘मध्य मधेस’ हुनुपर्ने आधारहरु :
Posted on : February 7, 2018 February 7, 2018 - No Comment
[“मधेसको राष्ट्रिय मुक्तिमा नै कोचिला, मिथिला, भोजपुरा, अवध र थरुहट को मुक्ति निहित छ । अहिले मधेशको राष्ट्रिय मुक्तिको संघर्ष संकटमा रहेकोले हाम्रो प्रत्येक क्रियाकलाप र निर्णयहरु मधेशी राष्ट्रिय चेतनाको विकास र मधेशी राष्ट्रिय एकतालाई दरिलो पार्ने तिर उन्मुख हुनु पर्छ ।’]
भाषा-सांस्कृतिक/ एतिहासिक धरोहरमा आधारित नामको सम्बन्धमा
दुई न प्रदेशको अन्य नामहरु पनि केही अर्थमा उपयुक्त देखिए पनि सम्पुर्ण मधेसमा एकता स्थापित गर्ने सवाल र मधेसी राष्ट्रिय चेतनाको विकासको लागि ‘मध्य मधेस’ नै सर्वाधिक उपयुक्त नाम हो । यसले मधेसको मुक्तिको राजनीतिको बाँकी कार्यसुची र कार्यदिशा निर्धारण गर्छ । यसले पुर्वीय र पश्चिम सहित सम्पुर्ण मधेसको आन्दोलन र सहिदको सम्मान हुनेछ । सबभन्दा महत्त्वपूर्ण यसले मधेसलाई नेपालको राजनीति विमर्शमा जिवित राख्दै भावी मधेस मुक्तिको संघर्षको दुई न प्रदेशलाई आधार ईलाकाको रूपमा स्थापित गर्ने छ । अत: नितिगत र रणनीतिक हिसाबले दुई न. प्रदेशको नाम ‘मध्य मधेश’ नै सर्वाधिक उपयुक्त देखिन्छ ।
जनजाति र मधेशीको कुरा क्षेत्रीय, खसआर्यको कुरा राष्ट्रिय हुने ? खस आर्य दुधले धोएको हो ?
१८६बाट अब जम्मा ५ राष्ट्रिय पार्टी भएपनि ३ वटाले मान्यता पाए, फोरम र राजपा कता हराए ?
उपेन्द्र यादव सहित यी चार नेताहरु जसको हातबाट बन्न सक्छ देश !